Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha SFP-ga Transceiver Module | Shiinaha SFP Warshad Module
10Gb / s 40KM SFP + Transceivers Optical OPS551X3CDL40
OPS551X83CDL40 10G SFP + transceivers waxaa loogu talagalay 10G Ethernet 10G BASE-ER / EW per 802.3ae, waxayna ku taageeri kartaa heerka xogta laga bilaabo 1.25Gb / s ilaa 11.1Gb / s. . Astaamaha 1. 10Gb / s interface optical serial waafaqsan 802.3ae 10GBASE-ER / EW 2. Iskuxirka korantada ee u hoggaansamaya SFF-8431specifications ee la xoojiyay 8.5 iyo 10 Gigabit qaab yar oo qayb ka mid ah moduleka la dhejin karo "SFP +" 3. 2-w ...
OPSP311X3CDL10 qalabka wax lagu duubo waxaa loogu talagalay 10Gb / s isdhexgalka muuqaalka indhaha ee isgaarsiinta xogta oo leh hal fiber fiber (SMF). Wareejiyaha wuxuu taageeri karaa 9.953- 11.1Gb / s. Naqshadeeyayaasha transceiver waxaa loo habeeyay waxqabad sare waxayna ku kacayaan qiimo wax ku ool ah si ay macaamiisha u siiyaan xalka ugu fiican datacom. Astaamaha 1. Kuleylka kulul 2. 10Gb / s interface optical serial 3. Ilaa 10km fogaanta 4. U hogaansanaanta SFP + MSA 5. Xidhmada SFP MSA oo leh isku xira LC isku xidhka 6. Digital Diagnostic Mo ...
10Gb / s Mowjadaha Gaaban ee Wareejinta SFP Wareejiyaha OPSP851X3CDLM
OPSP311X3CDL10 qalabka wax lagu duubo waxaa loogu talagalay 10Gb / s isdhexgalka muuqaalka indhaha ee isgaarsiinta xogta oo leh hal fiber fiber (SMF). Wareejiyaha wuxuu taageeri karaa 9.953- 11.1Gb / s. Naqshadeeyayaasha transceiver waxaa loo habeeyay waxqabad sare waxayna ku kacayaan qiimo wax ku ool ah si ay macaamiisha u siiyaan xalka ugu fiican datacom. Astaamaha ● Isku-xidhka kulul ● 10Gb / s interface optical serial ● Ilaa 10km masaafo ● La jaanqaadaya SFP + MSA package Xirmooyinka SFP MSA oo isku xira Lple isku xira ● Digital Diagnostic Monitor ...
10Gb / s 80KM SFP + Transceivers Optical OPSP551X3CDL80
OPSP551X3CDL80 10G SFP + transceivers waxaa loogu talagalay 10G Ethernet 10G BASE-ZR / ZW per 802.3ae, waxayna ku taageeri kartaa heerka xogta laga bilaabo 1.25Gb / s ilaa 11.1Gb / s. . Noocyada G 10Gb / s interface optical serial waafaqsan 802.3ae 10GBASE-ZR / ZW interface Iskuxirka korantada ee u hoggaansamaya SFF-8431specifications ee la xoojiyay 8.5 iyo 10 Gigabit qaab yar oo qayb ka mid ah qayb ka mid ah "SFP +" ● 2-silig ...
10Gb / s SFP + BIDI Transceivers indhaha OPSB321X3CDL10
OPSPB321X3CDL10 qalabka wax lagu duubo waxaa loogu talagalay 10Gb / s isdhexgalka muuqaalka indhaha ee isgaarsiinta xogta oo leh hal fiber fiber (SMF). Wareejiyaha wuxuu taageeri karaa 9.953- 11.1Gb / s. Naqshadeeyayaasha transceiver waxaa loo habeeyay waxqabad sare waxayna ku kacayaan qiimo wax ku ool ah si ay macaamiisha u siiyaan xalka ugu fiican datacom. Astaamaha ● Isku-xidhka kulul ● 10Gb / s interface optical serial ● Ilaa 80km masaafo ● La jaan qaadaya SFP MSA package SFP MSA xirmo leh Lple isku xira Mon Digital Diagnostic Monit ...
10Gb / s SFP + Bidi Transceivers indhaha OPSPB231X3CDL10
10Gb / s 1550nm Multi-rate XFP Transceivers Optical OPXP551X3CDL40
OPXP551X3CDL40 10G 1550nm XFP transceivers waxaa loogu talagalay 10G Ethernet 10G BASE-ER / EW halkii 802.3ae iyo 10G SONET OC-192 / SDH STM-64, waxayna ku taageeri kartaa heerka-xogta laga bilaabo 9.953Gb / s ilaa 11.1Gb / s. Baadhista dhijitaalka ah ayaa lagu heli karaa iyada oo loo marayo I2C interface sida ku cad XFP MSA. Naqshadeeyayaasha transceiver waxaa loo habeeyay waxqabad sare waxayna ku kacayaan qiimo wax ku ool ah si ay u siiyaan macaamiisha xalalka ugu fiican ee datacom iyo codsiyada telecom. Astaamaha ● Kuleylka kulul ● Taageerada 9.95Gb / s illaa 11.1Gb / s heerka sicirka ● Bel ...
10Gb / s 1310nm Multi-rate XFP Transceivers Optical OPXP311X3CDL10
OPXP311X3CDL10 10G 1310nm XFP transceivers waxaa loogu talagalay 10G Ethernet 10G BASE-LR / LW 802.3ae iyo 10G SOI OC-192 / SDH STM-64, waxayna taageeri kartaa heerka-xogta laga bilaabo 9.953Gb / s ilaa 11.1Gb / s.Digital ogaanshaha cudurka waxaa laga heli karaa iyadoo la adeegsanayo I2C interface sida ku cad XFP MSA. Naqshadeeyayaasha transceiver waxaa loo habeeyay waxqabad sare waxayna ku kacayaan qiimo wax ku ool ah si ay u siiyaan macaamiisha xalalka ugu fiican ee datacom iyo codsiyada telecom. Astaamaha ● Kuleylka kulul ● Taageer 9.95Gb / s ilaa 11.1Gb / s xoogaa sicirka ● Hoos ...
10Gb / s 850nm Multi-rate XFP Transceivers indhaha OPXP851X3CDLM
OPXP851X3CDLM 10G 850nm XFP transceivers waxaa loogu talagalay 10G Ethernet 10G BASE-SR / SW 802.3ae, waxayna ku taageeri kartaa heerka-xogta laga bilaabo 9.953Gb / s ilaa 11.1Gb / s. MSA Naqshadayaasha wax kala wareejinta waxaa loogu talagalay waxqabad sare iyo qiimo wax ku ool ah si ay macaamiisha u siiyaan xalka ugu fiican ee datacom iyo codsiyada telecom. Astaamaha ● Kuleylka kulul ● Taageer 9.95Gb / s ilaa 11.1Gb / s xoogaa ● Ka hooseeya 2.5W isticmaalka korantada ● XFP MSA ...
10Gb / s 1550nm Heerarka badan ee XFP Transceivers OPXP551X3CDL80
OPXP551X3CDL80 10G 1550nm XFP transceivers waxaa loogu talagalay 10G Ethernet 10G BASE-ZR / ZW 802.3ae iyo 10G SONET OC-192 / SDH STM-64, waxayna taageeri kartaa heerka-xogta laga bilaabo 9.953Gb / s ilaa 11.1Gb / s.Digital ogaanshaha cudurka waxaa laga heli karaa iyadoo la adeegsanayo I2C interface sida ku cad XFP MSA. Naqshadeeyayaasha transceiver waxaa loo habeeyay waxqabad sare waxayna ku kacayaan qiimo wax ku ool ah si ay u siiyaan macaamiisha xalalka ugu fiican ee datacom iyo codsiyada telecom. Astaamaha ● Kuleylka kulul ● Taageerada 9.95Gb / s ilaa 11.1Gb / s xoogaa bit Noqo ...
10Gb / s Bidi Multi-rate XFP Transceivers Optical OPXPB321X3CDL10
OPXPB321X3CDL10 10G XFP BIDI wareejiyeyaasha waxaa loogu talagalay 10G Ethernet 10G BASE-LR / LW 802.3ae iyo 10G SOI OC-192 / SDH STM-64, waxayna ku taageeri kartaa heerka-xogta laga bilaabo 9.953Gb / s illaa 11.1Gb / s. Baadhista dhijitaalka ah ayaa lagu heli karaa iyada oo loo marayo I2C interface sida ku cad XFP MSA. Naqshadeeyayaasha transceiver waxaa loo habeeyay waxqabad sare waxayna ku kacayaan qiimo wax ku ool ah si ay u siiyaan macaamiisha xalalka ugu fiican ee datacom iyo codsiyada telecom. Astaamaha ● Kuleylka kulul ● Taageer 9.95Gb / s ilaa 11.1Gb / s xoogaa sicirka ● Hoos ...
10Gb / s Bidi Multi-rate XFP Transceivers Optical OPXPB231X3CDL10
OPXPB231X3CDL10 10G XFP BIDI wareejiyeyaasha waxaa loogu talagalay 10G Ethernet 10G BASE-LR / LW 802.3ae iyo 10G SOI OC-192 / SDH STM-64, waxayna taageeri kartaa heerka-xogta laga bilaabo 9.953Gb / s illaa 11.1Gb / s.Digital ogaanshaha cudurka waxaa laga heli karaa iyadoo la adeegsanayo I2C interface sida lagu qeexay XFP MSA. Naqshadeeyayaasha transceiver waxaa loo habeeyay waxqabad sare waxayna ku kacayaan qiimo wax ku ool ah si ay u siiyaan macaamiisha xalalka ugu fiican ee datacom iyo codsiyada telecom. Astaamaha ● Kuleylka kulul ● Taageer 9.95Gb / s ilaa 11.1Gb / s xoogaa sicirka ● Hoos ...